Basil Bath Ngothando [ + 2 Recipes Recipes ]
kuqala » Ukothula IiBhafu » Basil Bath for Love
Namhlanje sivuya kakhulu ukuzisa kuni abanamandla bath basil ngenxa yothando.
Le bhafu iya kuba yinto engcono kakhulu oya kuyifumana njengoko siza kudibanisa izithako ezigqibeleleyo ukufezekisa naluphi na uhlobo lomntu.
Kweli nqaku lilula nelifundisayo siya kukubonisa indlela yokusebenzisa i-basil ukoyisa indoda ethile kunye nendlela yokuba nomtsalane ngakumbi.
Uya kufunda ukusebenzisa i-basil ngendlela ekhethekileyo kwaye engazange ityhilwe ngaphambili.
Ngamagqabi ambalwa esi sityalo, i-sinamon kunye nezinye izithako ezifihlakeleyo uya kutshintsha ubomi bakho ngothando.
Qaphela kakhulu kwaye ulandele zonke iingcebiso zethu kuba zixabisa igolide kwaye azikho kwenye indawo.
IBhasi yeBasil yoThando - Yenzelwe ntoni
Ngaba uyazi ukuba yintoni ibhafu ye-basil yothando?
Ewe, isihloko sithi konke, kodwa inyaniso kukuba zininzi iibhafu ngeenjongo ezahlukeneyo.
Okokuqala, siza kukufundisa ukuhlamba ukuze ube nomtsalane emadodeni ngokubanzi, oko kukuthi, uya kuphakamisa ukuncwina ngakumbi xa uhamba esitratweni, uya kuthandwa kakhulu kwimidiya yoluntu kwaye kuya kubakho amadoda amaninzi ucela iselula yakho!
vele uhambe ukufumana ukhuphiswano ngakumbi eluthandweni, uya kukunika ukutsala amathamsanqa kunye namadoda, amadoda nangakumbi amadoda!
Ukongeza kule bhafu inomtsalane, siza kukubonisa enye ibhafu enomdla kakhulu…
iya kusebenzela ukuphumelela kwindoda ethile.
Khawucinge ukuba kukho indoda oyithandayo kakhulu, kodwa awuzange ukwazi ukumoyisa ...
Uya kulandela onke amanyathelo ethu, hlamba kwaye uyakuphambana ngoko nangoko!
Uthando lwakhe ngawe luya kukhula ngokukhawuleza xa edlula kuwe.
Amandla okuhlamba asebenzayo nanini na xa esondele kuwe, kuya kumenza azive enomdla, esondele kwaye enomdla wokukubamba.
Emva kokuthatha le bhafu ye-basil yothando, kungcono ulumke kuba kuya kubakho ukhuphiswano oluninzi olukufunayo!
IBasil Bath yothando kunye nokutsala umdla
Le bhafu yileya isebenza ngothando ngokubanzi, oko kukuthi, kuya kukwenza ube nomtsalane ngakumbi.
Amadoda aya kukujonga ngakumbi esitalatweni, uya kuthandwa ngakumbi kwimidiya yoluntu kwaye amadoda amaninzi aya kuba nomdla wokukucela iselula yakho.
Isebenza ukutsala amehlo abo bonke abantu, yenza ngokufanelekileyo kwaye ulungele into ezayo!
amaqabunga e-basil eluhlaza;
Iipunipoyi ezi-3 zobusi;
Iipunipoyi ezi-3 zeswekile;
3 iintonga zesinamoni;
Iilitha ezi-2 zamanzi.
Indlela yokuhlamba i-basil:
Ukwenza le bhafu kulula.
Qala ngokubeka iilitha ezi-2 zamanzi abilayo kwaye nje ukuba abile wongeza amacephe ama-3 obusi kunye neecephe ezi-3 zeswekile.
Gxuma yonke into kakuhle de izithako ezibini zinyibilike emanzini.
Ngoku yongeza iintonga zesinamoni kwaye ekugqibeleni ungeze amaqabunga e-basil.
Malunga nezandla ezi-3 zamagqabi zanele.
Yiyeke ibilise imizuzu emi-2 ukuya kwemi-3 kwaye emva koko ucime ubilise.
Ngoku hluza umxube wonke kwaye ugcine amanzi kuphela, iya kuba la manzi oya kuyidinga kwibhafu ye-basil yothando kunye nomtsalane.
Ukuthatha le bhafu kulula kakhulu.
Abantu abaninzi bayabuza ukuba ibhafu ye-basil inokujulwa na entloko… Asiyicebisi, kodwa yijonge ngezantsi.
Thatha ishawa eqhelekileyo yezempilo kuqala;
Ngoku galela amanzi afunyenwe ngaphambili ukusuka emagxeni ukuya ezinyaweni;
Vumela umzimba wakho wome ngokwemvelo;
Nxiba iimpahla ezilula, kodwa ukuba ubomvu, nokuba ngcono!
Ngoku lixesha lokulinda ukuba ishawa iqale ukusebenza.
Ungayithatha zonke iintsuku ezisi-7.
Uya kubona ukuba uthando lwakho luya kutshintsha ngonaphakade, umtsalane wakho uya kubonakala phambi kwamadoda.
Yithathe ke uze apha uzo commenta. 😉
Bath ukoyisa indoda ethile
Ngaba ufuna ukutsala kunye nokoyisa indoda ebisoloko ikhona entliziyweni yakho?
Thatha nje le basil kunye ne-rosemary bath ukutsala umdla wakho kwaye ekugqibeleni uzuze intliziyo yakho.
Le yibhafu yothando enamandla kakhulu, landela iresiphi yayo yonke kwaye ujabulele zonke izibonelelo zayo.
1 i-sprig ye-rosemary eluhlaza;
Iipetali ezi-7 zerose ebomvu;
Ifoto e-1 yothando lwakho;
Iilitha ezi-2 zamanzi;
3 iicephe zobusi.
Ukuqala ukwenza le bhafu ye-basil yothando kufuneka ufumane umfanekiso wothando lwakho.
Qala ngokugalela iilitha ezi-2 zamanzi epanini naphambi kokuba ubilise dipha le foto amaxesha ama-3 ngokulandelelana emanzini.
Emva kokuba uyenzile oku ungabeka amanzi ukuba abile.
Yongeza i-sprig ye-rosemary eluhlaza, i-7 ye-rose petals ebomvu, i-3 tablespoons yobusi kunye ne-3 yezandla zamagqabi aluhlaza we-basil emanzini.
Gxuma kancinane kwaye uvumele ukuba ubilise imizuzu emi-4 ukuya kwemi-5.
Emva kwesi sihlandlo sexesha, unokucima ukubilisa kwaye uvumele amanzi afikelele kwiqondo lokushisa elimnandi.
Ukugqiba ukulungiselela kwethu, kuya kufuneka uchithe amanzi kwaye ugcine nje amanzi alula, la manzi aya kusetyenziselwa ukuhlamba.
Jonga indlela yokuyithatha ngezantsi.
Indlela yokuhlamba i-basil ngothando:
Njengoko senzile ngasentla, siya kukufundisa indlela yokuthatha le nyathelo lokuhlambela ngesinyathelo, ngendlela elula kakhulu.
Thatha ishawa elula kuqala, zama ukungasebenzisi isepha okanye isepha, amanzi nje;
Ngoku thatha umxube ofunyenwe kwisinyathelo sangaphambili kwaye uwugalele ngokucothayo ukusuka emagxeni ukuhla;
Njengoko ugalela la manzi, cinga umfanekiso wothando lwakho entloko ngokuphindaphindiweyo;
Qhubeka ucinge njengoko ugalela amanzi;
Emva kokuba amanzi ephelile, vumela umzimba wakho wome ngokwemvelo;
Nxiba impahla ekhanyayo okanye ebomvu, ngokukhethekileyo ebomvu;
Ibhafu yakho ithathiwe!
Ibhafu yakho yomtsalane ithathwa kwaye sele iqala ukusebenza.
Ngoku kuya kufuneka uphinde rhoqo ngeentsuku ezi-7, eli xesha liya kuba ngaphezu kokwaneleyo ukufumana zonke iipropathi zakho.
Ngaba ezi bhafu zinesigaba senyanga?
Ngethamsanqa ezi bhafu azinasigaba senyanga.
Unokuzithatha naluphi na usuku lweveki kunye nasiphi na isigaba senyanga.
Kodwa ukuba uthatha isigaba senyanga esinciphayo iya kuba nempembelelo enkulu ngakumbi kuwe, kodwa akukho mfuneko yokulinda ukuba kusekho iintsuku ezimbalwa eziseleyo.
Sincoma ukuba ukuba imeko engxamisekileyo ukuhlamba kwaye nokuba kukho ngaphantsi kweentsuku ezi-7 eziseleyo ukuba inyanga ehlayo ithathe, kulungile ukuyithatha yonke imihla ye-7, awudingi ukuyenza. ukuba awuziva uyidinga.
Ngaba ibhafu ye-basil yothando ine-contraindications?
Abantu abaninzi bayasibuza ukuba iibhafu zine-contraindications, oko kukuthi, ukuba zinemiphumo emibi.
Ngethamsanqa, njengoko ubona, zonke zenziwe nge-100% yezithako zendalo, ngoko ke azinalo naluphi na uhlobo lwe-contraindications.
Nangona kunjalo, sincoma ukuba ungawathathi ukuba ukhulelwe.
Kwakhona sincoma ukuba uhlolisise ukuba ngaba awuhambisani naziphi na izithako ezikhankanywe kwindawo yokuhlambela, ukuba akunjalo, ungayithathi.
Ngoku ubonile eyona iresiphi inamandla kwaye inamandla kwi bath basil ngenxa yothando do MysticBr Ndingakunqwenelela okuhle kodwa kweli nqanaba litsha lobomi bakho.
1 IBhasi yeBasil yoThando - Yenzelwe ntoni
2 IBasil Bath yothando kunye nokutsala umdla
3 Bath ukoyisa indoda ethile
4 Ngaba ezi bhafu zinesigaba senyanga?
5 Ngaba ibhafu ye-basil yothando ine-contraindications?